Man United Oo Ku Hor Kuftay Southampton Xilli Uu Paul Pogba Isku Qoray Taariikhda Premier League. – Banaadirsom | BANAADIRSOM
Home Ciyaaraha Man United Oo Ku Hor Kuftay Southampton Xilli Uu Paul Pogba Isku...
Man United Oo Ku Hor Kuftay Southampton Xilli Uu Paul Pogba Isku Qoray Taariikhda Premier League. – Banaadirsom
Kooxda Man United ayaa bar-baro niyad jab leh ku dhaafi waayay kooxda Southampton kulan ka tirsanaa premier League xilli Red Devils sii wado guulaha premier League.
Kooxda Man United ayaa ciyaarta ku bilaabatay qaab maamul ah iyaga oo ka awood badnaa kooxda Southampton kuwaas oo dhankooda ciyaarayay weeraro rogaal celis ah.
Red Devils ayaa ku dhibaatootay in ay dhaafto daafaaca Southampton kuwaas oo si fiican u difaacanayay waliba joojiyay isku dayadii Man United ee dhanka goolkooda.
Daqiiqadii 31-aad ayay Southampton si lama filaan ah hogaanka ugu qabatay ciyaarta kadib markii ay dhaliyeen goolka 1-aad ee ciyaarta iyaga uu u dhaliyay xiddiga Fred kaas oo si khaldan kubada ugu taabtay goolkiisa.
Kooxda Man United ayaa wax walba u samaysay sidii ay u dhalin lahaayeen goolka bar-baraha laakiin Southampton ayaa si fiican u difaacatay goolkeeda iyaga oo dhanka kale qaadayay weeraro rogaal celis ah.
Waxa sidaas ku dhamaatay qaybta hore ee ciyaarta oo ay Southampton hogaaminayso ciyaarta isla markaasna Man United ku dhibaatootay in ay dhaafto daafaca Southampton.
Kooxda Man United ayaa qaybtii dambe ee ciyaarta ku bilaabatay si dar-dar leh iyaga oo doonayay in ay ciyaarta ku soo laabato ka hor inta uuna wakhtigu ka dhicin.
Daqiiqadii 55-aad ayay Man United dhalisay goolka bar-baraha iyada oo uu Paul Pogba mar kale caawiyeka noqday goolka kadib markii uu baas cajiib ah u dhiibay xiddiga Mason Greenwood kaas oo ciyaarta ka dhigay 1/1.
Paul Pogba ayaa isku qoray taariikhda Premier League isaga oo noqday xiddigii ugu horeeyay ee Abid caawiye ka noqday 5 gool 2-da kulan ee ugu horeyeya horyaalka premier League.
Kadib bar-barahaas kooxda Southamton ayaa bilowday in ay weeraro gasho iyaga oo qaadayay weeraro rogaal celis ah xilli ay Man United kubada haystay in badan.
Labada kooxood ayaa helay dhawr fursad oo ay goolal ku dhalin kareen laakiin uma suurtagalin in ay gool u badalaan fursadaha ay heleen labada kooxood.
10-kii daqiiqo ee ugu dabeeyay kooxda Man United ayaa u muuqatay kuwo raali ka ah Bar-baraha marka la eego in ay Southampton ahayd kooxda wax walba ku fiican hadii ay noqoto fursadaha ama kubada ay haysatay.
Waxa sidaas ku dhamaatay ciyaarta oo ay Man United ku fashilantay in ay guul ka gaadho kulankeedii 2-aad ee horyaalka premier League
Previous articleHaweeney Reer Afganistan oo ku dhax Umushay Diyaarad Milatari Mareykanka leeyahay (Sawirro)
Next articleKooxda Ahmed Massoud ee DAGAALKA ku iclaamiyey ururka Taalibaan oo hadda sheegay inay doonayaan…